Askartii ugu badneyd oo Turkiga looga dilay dagaal ka dhacay Suuriya – STAR FM SOMALIA
Askartii ugu badneyd oo Turkiga looga dilay dagaal ka dhacay Suuriya
14 askari ka tirsanaa Ciidamada Turkiga ayaa lagu dilay dagaal kulul oo dhex maray dagaalyahanada Daacish, kaasoo ka dhacay agagaarka magaalada Al-Bab ee dalka Suuriya.
Dagaalka oo dhacay shalay oo arbaco aheyd ayaa Ciidamada Turkiga waxay taageerayeen Xoogaga hubeysan ee dagaalka kula jira Daacish.
Wararka ayaa sheegaya in dagaalka uu ahaa kii ugu xooganaa ee ay galeen Ciidamada Turkiga, iyadoo Kooxda Daacish ay adeegsaneysay weerar is qarxin ah iyo hub culus.
Milateriga Turkiga ayaa sheegay in 33 askari ay dagaalkan uga dhaawacantay, waana tiradii ugu badneyd ee askar Turki ah oo hal maalin looga dilo dagaal ay la galaan Daacish.
Turkiga ayaa ciidamo u dirtay bishii Agosto ee sanadkan dalka Suuriya, kuwaasoo taageeraya kooxaha kurdiyiinta iyo xooggaga kale ee dagaalka kula jira Daacish.
Magaalada Al-Bab ayaa ah magaalada labaad ee ay ku xooggan yihiin Kooxda Daacish, waxay 20KM u jirta xuduuda Turkiga uu la wadaago Suuriya.
Madaxweynaha Burundi oo sheegay inuu dacwad ka gudbinaayo Amisom
Danjirihii Ruushka ee Turkiga oo toogasho lagu dilay (Daawo Sawirada)